« Ambohimahadizina no tanànan’ialahy », hoy ny artista tamin’ny taona 2009 fa rehefa zohina kosa ankehitriny ny ataontsika sy ny fihetsitsika ary ny zavatra ataontsika rehetra dia hita fa tsy misy tetikasa miteha-tany intsony izay mivoaka rehetra fa toa mampanonofy ihany fotsiny sisa.
Malaza hatrany hoe fasana tetikasa i Madagasikara mandrak’ankehitriny kanefa dia arakaraky ny iverimberenan’ny tsikera no vao mainka ipoirana tetikasa marobe izay efa aharihary amin’ny sarambabem-bahoaka mihitsy moa hoe tsy ho tontosa ato ho ato. Eo ny fisandratana 2030 an’ny filoham-pirenena izay efa mahakivy mihitsy no mieritreritra azy satria na dia antonona hitadiavam-bahaolana maika aza ny tenany dia io hatrany no ventesiny. Ny filohan’ny tetezamita teo aloha koa moa tetsy an-kilany namoaka ny vinam-pisandratany ary ny azy tsy hoe mila hery vaovao tahaka ny an’ilay iray fa hoe mila rivo-baovao, hono, (nouveau souffle) ny firenena. Izany ve no antony nanolorana an’ity tetikasa ity tany Parisy amin’izay rivotra parizianina mihitsy indray no hiaingana. Dia hanidina any Parisy daholo izany isika mianakavy ? Ny an’ny sasany moa dia efa mivoana mihitsy satria dia hoe mila averina amin’ny maha tanin’olo-mahatoky (pays des hommes intègres) namantarana azy hatramin’izay, hono, i Madagasikara. Tanin’olo-mahatoky izay mira hoe Borkina Faso. Hiala amin’ny dika mitovy ny lalàmpanorenana frantsay ve izany dia hiditra amin’ny dika mitovy ny lalàmpanorenana borkinabe ? Sady efa tsy mandinika ny tantara izany ny mpanao politikantsika no tsy miteha-tany ihany koa fa efa any Ambohimanidina daholo.